Ciyaaraha ugu fiican ee ku saleysan taxanaha telefishanka | Androidsis
Ciyaaraha ugu fiican ee ku saleysan taxanaha telefishanka
Ignacio Sala | 04/06/2021 22:00 | Ciyaaraha Android
Dhowr sano ka hor, markii aan jeclaannay filin ku saleysan buug, waxaan ku dadaali doonnaa sidii aan u qaban lahayn buugga si aan riska ilaali filimka. Xaaladaha badankood, buuggu waa dhiirrigelin keliya oo filim ah, oo aad ayey u yar tahay in labada dhinac ay isku mid noqdaan.
Si kastaba ha noqotee, in muddo ah ka mid noqoshada, waa silsiladdii noqotay shay la caabudo, gaar ahaan kuwa hawada ku jiray muddo dheer, oo ku guuleystay abaalmarino badan, waxaa loogu talagalay dhagaystayaal da 'yar. In kasta oo qaar badani ay ku saleysan yihiin buugaag sida Game of Thrones oo aan horay u sii socon, dadka isticmaala waxay raadinayaan ciyaaro ama codsiyo la xiriira taxanaha, ma aha asalka sheekada.
Haddii aad ka mid tahay isticmaale noocan ah, adeegsadayaasha jecel inay sii wadaan sheekada taxanaha ay ugu jecel yihiin ciyaaraha, markaa waan ku tusi doonaa ciyaaraha ugu fiican ee ku saleysan taxanaha telefishanka.
2 Futurama: Adduunyada Berri
3 Simpsons The: Springfield
4 South Park: Taleefoonka Qaranka
5 Mindsadaha Dambiyada
6 Ciyaaraha Carshiga: Guul
7 Shisheeyaha Waxyaabaha: Ciyaarta
8 Dhimashada Socodka Ninna Dhulkiisa
9 Xaaladda Badbaadada: Wadashaqeynta Dhimashada Socodka
Qoyska Guy waa majaajillada ugu weyn ee qaangaarka ah ee aan ka heli karno adduunka telefishanka. Peter Griffin (aabaha qoyska), Louis (xaaskiisa), Stewie, Meg, Chris y Brian (eey) samee qoys dystopian ah oo aan ku darno Joe swanson, nin booliis ah oo ku socda curyaamiinta, Glenn satyr aan lahayn xishood nooc ah, Cleveland y Herbert, dhagax dhagax deriska ah ee qoyska Griffin.
Haddii aad ka heshay taxanahan in ka badan 15 xilli oo ay hawada soo jirtay, waa inaad fiirisaa cayaaraha Guy Qoyska: Raadinta, ciyaar ay tahay inaan ka badbaadino magaalada burburka. Cinwaankan waxaa loo heli karaa soo degsiin bilaash ah, waxaa ku jira wax ku iibsiga gudaha-wuxuuna u baahan yahay Android 5.0 ama ka dib.
Guy Qoyska: Raadinta
Cinwaan kale oo xiiso leh oo ku saleysan taxanahan ayaa laga helay cinwaanka Guy Qoyska - Ciyaar kale oo Freakin Mobile ah. Cinwaankan waxaan ku ciyaari karnaa doorka halyeeyada ugu muhiimsan ee taxanahan socdaal aan caadi aheyn oo dhex maraya magaalada Quahog, anagoo qabanayna culeysyo nooc walba leh oo aad ugu eg kuwa ay lakulmeen halyeeyaasheena qeybaha taxanaha.
Guy Qoyska- Ciyaar Kale oo Freakin ah
Futurama: Adduunyada Berri
Isla abuureyaasha taxanaha Guy Qoyska, waxaan ka helnaa Futurama, sidaa darteed waxaan sidoo kale dooneynaa inaan helno xaaladaha ugu macquulsan. Halxiraalahan, waxaan iska dhigeynaa kabaha dhamaan jilayaasha aan jecel nahay cDhis New New York La dagaallama noocyada shisheeyaha oo sahamiya meerayaasha aan la aqoon adduunka oo dhan.
Futurama: Adduunyada Berri, ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad ka iibsato gudaha dalabka oo u dhexeeya 2,29 euro ilaa 114,99 euro. Wuxuu ubaahanyahay Android 4.0 wixi kadambeeya
Simpsons The: Springfield
Cinwaankan ku saleysan taxanaha telefishanka halyeeyga ah ee in ka badan 30 sano hawada ku jira, waa inaan ka caawinaa Homer inuu la midoobo kuwii uu jeclaa oo aan ahayn kuwa aad u jecel. Waa inaan dib u buuxi garoonka guga leh jilayaasha aad jeceshahay iyaga oo si faahfaahsan u labbisan.
Cinwaankan waa inaan si buuxda u dhisnaa magaalada, laga bilaabo Moe's Tavern ilaa Krusty Burger, illaa dugsiga, hoolka magaalada, Badulaque iyo mas'uul ka noqo nolosha dhammaan muwaadiniinta Srpingfield.
Simpsons-ka: Springfiled ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad ka iibsatid arjiga gudahiisa, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 109,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 4.1 ama ka dib.
South Park: Taleefoonka Qaranka
Wax yar ama wax aan ka nidhaahno taxanaha South Park ee aadan aqoon, kale oo ka mid ah taxanaha ugu da'da weyn adduunka telefishanka taas oo iyaduna leh la-socodsiinteeda rasmiga ah ee aaladaha mobilada ee leh South Park: Telefoonka baabi'iyaha.
South Park: Telefoonka baabi'iyaha waxaa ku jira jilayaasha caanka ah ee laga garanayo South Park, Istaraatijiyad waqtiga dhabta ah, Dagaalada PvP, kaftan dhanaan iyo kaararka la ururin karo.
In ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah, South Park: Telefoonka baabi'iyaha ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash waxaana ka mid ah iibsiyada u dhexeeya 0,89 euro ilaa 54,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib.
South Park: Taleefoonka Baabi'iye ™
Mid kale oo ka mid ah taxanayaashii ugu waqtiga dheeraa adduunka telefishanka, Minds Minds, sidoo kale wuxuu leeyahay la qabsasho u gaar ah oo ah qaab ciyaar loogu talagalay aaladaha mobilada. Cinwaankan, waa inaan hogaamiya kooxda FBI-da ee ku xeel-dheerayaasha, Qaybta Falanqaynta Habdhaqanka si loo raadiyo gacan ku dhiiglayaasha ugu arxan laawayaasha ah.
Waqtigu waa udub dhexaadka looga hortago dhibbanayaasha cusub inay soo muuqdaan. Haddii aad ka heshay taxanahan CBS, waxaad fikrad ka heli kartaa sida ay u shaqeyso, maadaama ay gebi ahaanba ku saleysan tahay taxanaha. Criminald Minds ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash oo ay kujirto taxane ah iibsasho gudaha-app ah oo udhaxeysa 1,19 euro ilaa 9,99 euro.
Maskaxda Dembiyada: Ciyaarta Moobilada
Developer: Barta Goorta
Ciyaaraha Carshiga: Guul
In kasta oo ay run tahay in Dukaanka Play-ka aan ku leenahay tiro badan oo ah Ciyaaraha Carshiga, midka kaliya ee rasmiga ah waa kan, markaa waxaad na soo bandhigi kartaa dhammaan waxyaabaha ku jira silsiladda iyada oo aan la helin dhibaatooyinka xuquuqda lahaanshaha.
Ciyaaraha Carshiga oo guryaha waawayn soo waxay wajahayaan masduulaagii cirka ka talinayay ciidankii kuwii dhintay. Waa inaan abuurnaa boqortooyo gaar ah oo aan abuurno xulafo si aan awood ugu siino masduulaaga inuu u horseedo ciidankeena inuu qabsado dhulal cusub.
Game of Thrones: Guusha waxaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah iibsashada gudaha-app-ka oo u dhexeeya 1,09 ilaa 109,99 euro waxayna u baahan tahay Android 6.0 ama ka dib.
Game of Thrones: Guul - Game Ciyaarta carshiga
Developer: Warner Bros. Shirkadaha Caalamiga ah
Shisheeyaha Waxyaabaha: Ciyaarta
Cinwaankan, oo ku saleysan xilli-ciyaareedkii labaad ee taxane caan ah oo Netflix ah, wuxuu dib noogu celinayaa 1984, halkaas oo ay tahay inaan ku qaadno sahamiyaan Hawkins iyo hareeraheeda si loogu noolaado xiisaha leh jilayaasha aan jecel nahay, xallinta xujooyinka leh awoodaha gaarka ah ee dabeecad kasta ...
Waxyaabaha Shisheeyaha ah ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, kuma jiraan xayeysiis ama nooc kale oo lacag abuurid ah. Waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib.
Waxyaabaha qalaad: Ciyaarta
Dhimashada Socodka Ninna Dhulkiisa
Cinwaankani waa ciyaar ka mid ah door iyo xeelad ku saleysan taas oo ay tahay inaan ka helno ilo, hub iyo hub si aan uga difaacno saldhiga apocalypse zombie. The Walking Dead No Man's Land, wuxuu ina gelinayaa kabaha Rick, Daryl iyo Gleen xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanaha.
The Walking Dead No Man Man's Land waa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsiga barnaamijka oo u dhexeeya 1,09 euro ilaa 109,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib.
The Socodka dhintay No Man ee Land
Developer: Ciyaaraha xiga
Xaaladda Badbaadada: Wadashaqeynta Dhimashada Socodka
Cinwaankan oo ku saleysan taxanaha caanka ah The Walking Dead waa inaan ku qasban nahay dhiso magaalooyin awood u leh inay ka badbaadaan weerarada kooxaha zombies, halka dowladda iyo militariga ay ka shaqeeyaan dhulka hoostiisa si xal loogu helo dhibaatada.
Xaaladda Badbaadada waxay nagu casuuntay - raadsato xulafo isla markaana abuuro isbahaysi istiraatiiji ah si looga badbaado aadanaha 2.0, halka aan dooneyno waa inaan ku qornaa sharciyada lagula dagaallamayo ciidamada zombies-ka ee sida dhaqsaha isu beddela inta aan badbaadinayno kuwa badbaaday.
Wadashaqeynta Dhimashada Socodka ayaa diyaar u ah adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah iibsashada gudaha-abka oo u dhexeeya 1,09 euro ilaa 109,99 euro waxayna u baahan tahay Android 4.1 ama ka sareeya.
Developer: Qabashada KingsGroup
Mid ka mid ah taxanaha weyn ee ku yimid Netflix sannadihii la soo dhaafay waa Narcos, taxane ah caan ka dhigtay oraahda "qalin ama macdanta". Cinwaankan waxaan ku amri karnaa kooxda daroogada ugu halista badan adduunka si loo maareeyo ganacsiga iyadoo la adeegsanayo dhammaan ilaha qalabkaaga ku jira ee madaxaaga soo mara.
Qorista shaqaalaha, dhisaan qalcado, abuuraan isbahaysiyo oo dagaal la galaan kooxaha kale. Iyadoo in kabadan 300.000 dib u eegis iyo qiimeyn celcelis ahaan 4,5 xiddigood 5ta macquul ahba, waxaan helnay ciyaar ku guuleysatay inay taxanaha si aad u wanaagsan ciyaarta u keento
Codsiga waxaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah iibsashada gudaha-abka oo u dhexeeya 0,59 euro ilaa 164,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha ugu fiican ee ku saleysan taxanaha telefishanka
7-da barnaamij ee wararka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android